Imewe Na-abawanye Okporo ụzọ 25%
Gaa na 25% Ebe ọ bụ na Redesign
Tọzdee, Febụwarị 10, 2011 Saturday, October 29, 2011 Douglas Karr
Anyị enweghị Martech Zone n'ụzọ ziri ezi otú anyị ga-amasị ya, mana imepụta ọhụụ enweela nnukwu mmeri. Okporo ụzọ na saịtị nwere mụbara karịa 25% na ihe ngosi peeji karịrị 30%. Nke ahụ anaghị agụnye okporo ụzọ ndị ọzọ anyị na-enweta site na akwụkwọ akụkọ ọhụrụ anyị kwa izu (denye aha n'elu).
Imewe na-anọgide underrated dị ka a n'aka na- dịkwuo okporo ụzọ gaa na saịtị gị. Ndị mmadụ na-agaghị emefu ego na a oké imewe fọrọ nke nta mgbe niile na-arụ ụka m banyere etinye na a ọkachamara imewe. Ọ bụghị naanị ya.
Nnukwu imewe bụ nnukwu ego na ụlọ ọrụ gị. Otu enyi anyị, Carla Dawson (4 Nkịta Chepụta), Ezubere iteration nke blog. Ajụrụ m maka ihe dị ọcha zuru oke nke gụnyere akara ngosi. Anyị emeela mgbanwe ole na ole ebe ọ bụ na ịmalite, mana usoro nhazi dị ọcha, doro anya bụ ihe anyị mechara.
Anyị tinyekwara aha WordPress si Post tọmbneelụ n'ime anyị ịde blọgụ template na kwukwara a ngwa mgbakwunye iji mepụta thumbnail na-akpaghị aka site na mbido ihe osise na blog post. N'ụzọ dị otu a, enweghị m ịzụ ndị na-ede blọgụ niile etu esi eji atụmatụ ahụ.
Nakwa, isiokwu ahụ na-agụnye mgbasa ozi siri ike dabere na ụdị nke blọọgụ ma ọ bụ peeji nke isi edemede. Ọ bụrụ na ịchọọbeghị ha, ị ga-ahụ nke ọ bụla n'ime edemede anyị dị na isi igodo: Analytics, ịde blọgụ, email Marketing, Mobile Marketing, Njikwa Ngini Nchọnchọ, Social Media Marketing na Technology.
Mgbe anyị enweghị onye nkwado anyị na mbụ, anyị emechiela ihe nkwado 2! Emailium na-akwado ozi Email Email anyị na GetApp na-akwado akwụkwọ Teknụzụ anyị! A pụrụ iche ekele na-apụ Nkwado maka usoro mgbasa ozi mgbasa ozi dị egwu.
Elegharala itinye ego na atụmatụ ọhụrụ anya. Ọ ga-amasị m ịgwa gị na ọ bụ maka ọdịnaya ahụ - mana nke bụ eziokwu bụ etu esi edozi ma gosipụta ọdịnaya dị ezigbo mkpa.
Feb 11, 2011 n’elekere 2:42 nke abali
A nnukwu ihe ịga nke ọma akụkọ! M hụrụ ọhụụ ọhụrụ n'anya.
Feb 11, 2011 n’elekere 2:43 nke abali
Daalụ Brandon! More na ụzọ!
Feb 19, 2011 na 4:12 PM
Anya ọhụrụ ahụ ka na-emezi m, n'ihi na enwere m ntụsara ahụ ebe ihe dị. Mana ebe ọ bụ, 75% nke ndị ọbịa na-adịkarị ọhụụ, ọ dị ezigbo mkpa na ndị ọbịa ọhụụ dịka saịtị ahụ, ma dabere na ọnụọgụ gị, ha doro anya na ha na-eme!
Anyị na-arụ ọrụ ugbu a na redesign nke saịtị anyị: http://www.roundpeg.biz ma na-elele mgbanwe gị nke ọma iji hụ ihe anyị nwere ike ịmụta n'aka gị.